Nakidzwa nenzvimbo neyemutemo NASA app | IPhone nhau
NASA yagara iri sangano rakapa chinzvimbo chekutanga kugovana mifananidzo yese nemavhidhiyo akawanikwa pamwe nevese vanhu, uyezve iko iPhone kunyorera kwakakosha mumishoni iyi sezvo ichiwana huwandu hwee mamirioni avanhu Nenzira yakapusa. Zvakakosha here kutora kushanya kweapp nguva nenguva?
1 Zvinoshamisa zvemukati
Pamuviri wega, semunhu anoyemura zvese zvine chekuita nenzvimbo uye akakura nedzidziso dzaCarl Sagan, zviri pachena kushandiswa kweNASA zvakakosha pane yangu iPhone. Zviuru zvemifananidzo inoshamisa (izvozvi ivo vanopa zvinopfuura zviuru gumi neshanu) mududziro yepamusoro mashoma ematepi, uye unogona kusarudza kwavanobva pakati pezvisarudzo zvitatu: NASA IOTD (Mufananidzo WeZuva), APOD uye mamwe mabviro e mifananidzo.
Pamusoro pezvakanaka zvemukati, NASA inotipawo mukana wekuwana mhando dzese dzemavhidhiyo zvine chekuita nenzvimbo dzenzvimbo. Ndosaka tichigona kuwana mavhidhiyo eJupiter, mini-zvinyorwa zvinotsanangura maitiro eNASA, tsananguro yehunyanzvi yekuzvibata kwenzvimbo uye zvimwe zvinhu zvakawanda mumavhidhiyo anodarika zviuru gumi nemaviri anopiwa neNational American space agency.
Zvimwe zvikamu zvacho zvinofanirwa kutaurwawo, nekuti zvinogona kudaro of kufarira kune vamwe vashandisi: nhau dzinenge dziripo, maTweets kubva kuaccount account, TV & Radio ine zviteshi zviri pamutemo uye chikamu chakakosha chemamishini.
Kunyangwe izvo zvemukati zvekushandisa zvisina mhaka uye zvakakosha, iko kushanda kuri zvisinganetsi. Kana vakatiudza kuti haina kuvandudzwa kubvira 2011 tinogona kuzvitenda, nekuti padanho rekugadzira uye rekushandisa isu takatarisana nechikumbiro chakaipa chemabhajeti anobatwa neNASA.
Semuenzaniso, iyo skrini skrini. Isu tinoiwana iine grey inotyisa uye rondedzero yesarudzo dzakaiswa mumaminitsi mashanu nemugadziri pabasa, pasina kuita shoma basa kuti uipe imwe fomati uye zvine musoro. Izvo hazvinzwisisike kuti muna 2016 kunyorera kunoratidzika seichi, asi nerombo rakanaka ivo vanongofanirwa kupa imwe nguva nesimba kuti vagadzirire.
Chinhu chakakosha kupfuura zvese, izvo zvirimo, ivo vanotova nazvo. Padanho rekuona Iko kunyorera kunoshamisa uye ndosaka ichiri kuisirwa pamidziyo yangu yese yeApple. Uye zvakare, iko kunyorera kuri mahara zvachose uye isu hatibhadhariswe chero nguva yekutora chero chiito, chimwe chinhu chinogara chichifarirwa kunyangwe kana iyo app ichibva kusangano rine simba seNASA.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nakidzwa nenzvimbo neyepamutemo NASA app